Mampiseho ny andalana lozisialy mailaka finday | Martech Zone
miaraka finday mahatratra ny birao ho an'ny tahan'ny fisokafana mailaka dia nanao fikarohana aho androany tolakandro teo amin'ny halavan'ny andalana foto-kevitra azo jerena amin'ny finday. Ny tsipika momba ny lohahevitra dia matetika manandanja kokoa noho ny atiny mailaka mihitsy raha ny amin'ny fihetsiky ny mpamaky sy ny hanokafan'izy ireo ny mailaka na tsia.
Izao dia misokatra amin'ny telefaona finday ny ankamaroan'ny mailaka isan'ny endri-tsoratra manana amin'ny fitaovana iPhone, Android, Windows na Blackberry ianao dia fohy dia fohy… eo anelanelan'ny litera 33 sy 44 fotsiny. Ny lohahevitra eto… Mampiseho ny andalana lozisialy mailaka finday dia tonga amin'ny tarehin-tsoratra 34 fotsiny. Tsy dia be loatra ny toerana hampiakarana ny fahalianan'ny mpamaky sy hanokatra azy ireo - fanamby ho an'ireo mpivarotra mailaka.
Ity infographic avy amin'ny Mass Transmit antsipirihany ny fikarohana momba ny seho an-tsipika mailaka aseho amin'ny finday.
Tags: lavalava lohahevitra androidlavalava lohahevitra blackberryhalavan'ny andalan-droidiphone 4 andalana lohahevitraiphone 4 laharana andalana halavanyiphone 5 andalana lohahevitraiphone 5 laharana andalana halavanyandalana lohahevitra iphonelavalava lohahevitra iphonemailaka findayhalavan'ny andalanawindows tsipika lohahevitra findaywindows halavan'ny lohahevitra finday